Etu ị ga - esi mepụta Asụsụ nke Gị Na Nsụgharị Morse | Akụrụngwa n'efu
Taa, anyị laghachi na otu n'ime nkuzi anyị na-atọ ụtọ. Oge a achọrọ m igosi gị ọrụ dị mfe nke ga-ewe gị obere oge iji mejuputa yana nke ị ga-enwe ike iji wuo ụdị onye ntụgharị site n'asụsụ edepụtara na koodu Morse Dị ka ọ dị na mbụ, eziokwu bụ na anyị agaghị agafe ọrụ ebe a efere achịcha na a arduino osisi Ebe ọ bụ na, ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu, ma na ọkwa ngwanrọ na usoro nke ngwụcha ngwụcha, ị kwesịrị ịbụ onye na-emejuputa azịza, nke pere mpe, mara mma.
Echiche na-amalite site na ịmepụta a Ntụgharị asụsụ nke ụdị font ọ bụla, mkpụrụokwu ma ọ bụ akpaokwu na koodu morse. Nke a dị mfe dị ka iji bọọdụ Arduino nke ga-abụ nke nwere sọftụwia dị mkpa eburu nke mere na, site na npụta ya, anyị nwere ike ịme ndị ọkụ ole na ole ka ha lee anya na asụsụ Morse anyị na-ekwupụta. Iji dee ederede anyị chọrọ ịtụgharị n'ụzọ dị mfe, anyị ga-eji ekwentị mkpanaaka eji arụ ọrụ sistemụ gam akporo nke ga-eziga ederede site na njikọ Bluetooth na bọọdụ anyị. Arduino UNO.
1 Ihe dị mkpa iji rụọ ọrụ ahụ
2 Nzọụkwụ iji rụọ ọrụ ahụ
3 Njikọ n'etiti bọọdụ Arduino na kọmputa
Ihe dị mkpa iji rụọ ọrụ ahụ
Dika anyi gbaliri igosi na uzo di elu, iji mezuo oru a, anyi ga acho ihe omuma karie, obu, ma ichoro uwa onye rụrụ, Ekwenyesiri m ike na ma ọ gaghị esiri gị ike ịchọta ihe ị na-efu na ụlọ ahịa ọ bụla ị na-enwekarị ma ọ bụrụ na ịnweghị ya, ọ bụ ezie na, dị ka m na-ekwu, ha na-abụkarị ihe eji eme ihe mgbe nile. Kpọmkwem, anyị ga-achọ ndepụta ndị na-esonụ:
Bluetooth maka Arduino
Ọkụ ikanam anọ, 3 nke otu agba na ọkụ nke anọ nke agba dị iche
Ọtụtụ eriri iji kwado njikọ dị n'etiti ngwaọrụ, na nke a iji jikọọ bọọdụ na onye njikwa Arduino anyị
USB jikọọ Ardunio na ntinye USB iji budata ngwanrọ ahụ
Na-ekwu okwu mpi
Kọmputa nwere Arduino IDE arụnyere n'ụzọ ziri ezi na Njikọ USB iji jikọọ bọọdụ ahụ
Ngwaọrụ mkpanaaka sistemụ arụmọrụ Android 2.2.1 ma ọ bụ karịa
Ozugbo anyị nwere ihe niile dị mkpa, anyị nwere ike ịga n'ihu na mmejupụta ọrụ ahụ. Otu isi okwu iburu n'uche bu na nke ahu ọ dịghị mkpa ịnweta nkwụnye bluetooth eji arụ ọrụ a ma ọ bụ kaadị Arduino UNO dị ka nke a ebe enwere ike iji ihe ọ bụla ọzọ nwere njikọ njikọ, naanị anyị ga-a havea ntị na njikọ ejiri wee, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na mmepụta dijitalụ 13 nke anyị Arduino UNO nke a kwekọrọ na otu mbupute nke bọọdụ ị na-eji.
Nzọụkwụ iji rụọ ọrụ ahụ
Iji rụọ ọrụ a, n'okpuru, m ga-egosi usoro usoro metụtara nzukọ na njikọ nke ihe niile mejupụtara ndepụta gara aga nke anyị ga-agbaso maka igbu ha n'ụzọ ziri ezi. Dị ka mgbe ụdị nke oru ngo, na-eche kpamkpam free ka gbanwee usoro ọ bụla nke koodu ma ọ bụ tinye ngwaike iji mepụta na ọbụna mezue ọrụ ya ebe ọ bụ na a na-anabata ụdị mmelite ọ bụla mgbe niile.
Ke akpa itie anyị ga-eme njikọ nke Arduino UNO jiri bred anyị. Kpọmkwem, ntinye a ga - eji bụ GND na 3.3 V. Otu ahịrị ndị a ga - enyere anyị aka, tinyere ihe ndị ọzọ, iji nye ike na ntanetị Bluetooth anyị.
Ozugbo anyị mere njikọ ndị a, oge eruola ịhazi ntinye data na ntinye nke ihe ntanetị Bluetooth na ntinye data dijitalụ na ntinye nke bọọdụ Arduino. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ihe nkwụnye ọkụ anyị jikọtara na kaadị ahụ ka ọ wee nata ugbu a ka ọ bụrụ na ọ dị kpamkpam na ọkwa teknụzụ iji nwee ike ịmalite 'gee ntị'data na-eru ya site na ọdụ ụgbọ mmiri nke ntinye nke Arduino UNO. Dịka nkọwa zuru ezu, gwa gị na n'oge ụfọdụ, n'ihi kaadị anyị ji eme ihe na ihe ntanetị Bluetooth, njikọ ndị ejiri nwere ike ịdị iche iche, n'oge a, ihe kachasị mma bụ lee anya na akwụkwọ nkwụnye ihe nkwụnye ọkụ dịka ha na-ejikarị eserese njikọta.
Anyị rutere 3 volt mpi njikọ. N'ihi na nke a anyị ga-eji dijitalụ mmepụta nọmba 13 nke Arduino UNO. Njikọ fọdụrụ, dị ka ọ dị na mbụ, anyị ga-ejikọta ya na GND ma ọ bụ ala ka ọrụ nke mpi ahụ wee bụrụ eziokwu.
Ugbu a bụ oge jikọọ LEDs dị iche iche. Ka ị ghara ịnwa ịme mgbagwoju anya, gwa gị na echiche ahụ bụ ijikọ ụkwụ kachasị ogologo nke ya, nke ziri ezi, na otu nsonaazụ dijitalụ nke Arduino UNO mgbe onye dị nkenke na-ejikọ GND ma ọ bụ ala. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-achọpụta na nke mbụ nke LED LED ga-ejikọ na mmepụta nke dijitalụ 12, nke na-esote mmepụta 8, nke atọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iji wepụta 7 ebe naanị LED na-acha anụnụ anụnụ ga-ejikọ na 4 na-emepụta ihe.
The ikpeazụ nzọụkwụ, mgbe anyị nwere niile wiring njikere bụ jiri eriri njikọ USB iji jikọọ nke anyị Arduino UNO na kọmputa ma si otú a nwee ike ịnye ya software dị mkpa, nke anyị ga-ede ma chịkọta site na Arduino IDE n'onwe ya.
Njikọ n'etiti bọọdụ Arduino na kọmputa
Otu isi ihe a na-aghaghị iburu n'uche mgbe anyị nwere bọọdụ jikọọ na kọmpụta iji mara na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma, opekata mpe na ụkpụrụ, bụ na bọọdụ ahụ ga-enwe acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ on niile mgbe dị ka ogologo dị ka ọ na-anọgide jikọọ na kọmputa. N'aka nke ọzọ ma dabere na nkwụnye Bluetooth anyị ji eme ihe, nke a na-enwekarị ọkụ na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie n'ihi na ọ kwadoghị njikọ na ngwaọrụ gam akporo na anyị ga-eji zipu mkpụrụedemede, ahịrịokwu ma ọ bụ okwu na efere ahụ.
Amaara m na nkọwa ahụ dị n'elu nwere ike ịdị ka ihe 'tonto'Mana enwere m ike ijide gị na ha dị ezigbo mkpa, dị mkpa na ọkachasị na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na n'ime onye mebere obodo ha nwere ike ịdị ndị na-amalite nakwa na, ekele nye ndị a dị nta 'aghụghọ'ha nwere ike ịghọta na, ọ dịkarịa ala, ugbu a ruru ma nkwụnye ọkụ na bọọdụ n'onwe ya.
N'oge a anyị ga - ebudata ngwa ahụ MORSE.apk mmasị. A gha etinye ngwa a na ekwentị mkpanaaka gị nke eji sistemụ arụmọrụ gam akporo. Ozugbo arụnyere ya, naanị ị ga-emepe ngwa ahụ wee pịa n'ihu. Oge a nhọrọ kachasị amasị anyị bụ 'Zipu Ederede', otu na nke anyị nwere pịa iji nweta ya. Ozugbo n'ime, anyị ga-pịa 'Jikọọ' iji gosi njikọ ahụ na efere anyị.
Usoro ngbanwe nke agbasoro bụ dị ka ndị a.
Ozugbo ị nwetara ngwa ahụ na ngwaọrụ gam akporo gị ma soro usoro ndị gara aga, ị ga-enwe ike ide leta, okwu ma ọ bụ ahịrịokwu ọ bụla. Ozugbo i dere ihe ị chọrọ, ị ga-pịa izipu.
Ọ bụrụ na anatala ederede ahụ n'ụzọ ziri ezi sistemụ ga-agbanye ọkụ na-akpaghị aka ma tinye ụda
Echiche bụ na ihe ọkụkụ mbụ na-acha akwụkwọ ndụ ga-aga ma pụọ ​​iji chọpụta 'isi'. N’aka nke ya, mpi ahụ ga-ada, ya agbanyụ n’otu oge.
Nke abụọ na nke atọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọkụ ga-agbanye ma gbanyụọ iji chọpụta 'akara' n'aka. Mpi ahụ, dịka ọ dị na mbụ, ga-agbanye ma gbanyụọ n'otu oge ahụ.
N’ikpeazụ ọkụ nke anọ, ya bụ, ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, ga-agbanye wee gbanyụọ iji chọpụta njedebe nke agwa, okwu ma ọ bụ akpaokwu ahụ. Mgbe enwere ụdị oghere n’etiti agwa ọ bụla, okwu ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu a, ọkụ a ga-agbanye ma gbanyụọ ya ugboro abụọ.
Dị ka ihe iji banye na akaụntụ, dị na-agwa gị na na nke a gam akporo ngwa e mere ekele App Inventor, a nnọọ mfe ụzọ n'ịwa koodu na imewe nke ngwa na-emecha ga-agba ọsọ na a ngwaọrụ onwem na-arụ ọrụ sistemụ nke ndị injinia Google kere.
Ozi ndị ọzọ na nkọwa: ndị nkụzi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Mepụta asụsụ gị ka onye ntụgharị ntụgharị nke morse
Wayszọ 3 iji wuo igwefoto inyocha n'efu